အထွေထွေဗဟုသုတ Archives - Page 87 of 92 - Online Hartha
အမိူက်တစ်စမှ မရှိတဲ့အပြင် မူးယစ်ဆေး အရက်လုံးဝ သောက်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရွာကလေး အကြောင်း
May 10, 2020 by Online Hartha
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှိုက်ကင်းစင်နယ်မြေ ၊ စံပြကျေးရွာရယ်လို့ အစိုးရ အဆက်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ တော်တော်များများဟာ လူကြီးလာမယ်ဆိုမှ တစ်အိမ်တစ်ယောက် အမှိုက်ထွက်ကောက်ကြတာများပါတယ်။ အမှိုက်ကင်းစင်နယ်မြေလို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ထောင်ထားပေမယ့် အမှိုက်ပစ်သူတွေက ပစ်ကြတာပါပဲ။ အဝေးကြီး မကြည့်ပါနဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေကို သွားကြည့်တာနဲ့ သိသာမြင်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုထဲက ကွဲပြာစွာရှိနေတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ဆင်နက်ချောင် ဆိုတဲ့ ရွာကလေးပါ။ တစ်ရွာလုံးမှာ အမှိုက်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးယူရလောက်အောင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လှတဲ့ ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အခုလို ဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့။ အုပ်ချုပ်သူ ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အပြင် ၊ ရွာသူရွာသားတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်အောင်လည်း အုပ်ချုပ်တတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ အပြင်ပမ်းပါ.။ တကယ်တမ်းက အမှိုက်ကင်းရုံသာမကပဲနဲ့ မူးယစ်လည်း ကင်းစင်ပါတယ်။ သူတို့ရွာမှာ တစ်ရွာလုံးသဘောတူညီမှုနဲ့ … Read more
မြန်မာပြည်ကနေ ကိုဗစ် အပြီးတိုင် ပျောက်သွားမယ့် နည်လမ်း (၂)ခုနှင့် လိုက်နာရမည့် အမူအကျင့်များ
May 9, 2020 by Online Hartha
ကိုဗစ်ဟာ ခဏတဖြုတ်ဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားမယ့် ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရင်သဘောပေါက်မှရမယ်…။ တုပ်ကွေးလိုမျိုး ရာသီပေါ်လေးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ (၅) လကျော်ပြီဆိုတော့လည်း သိသာနေပြီ။ ကူးစက်မြန်တဲ့ ကပ်ရောဂါတစ်ခု ပျောက်ကင်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းက (၂) ခုပဲရှိတယ်။ လူအများစု အကူးခံရပြီး ကိုယ်ခံအားထွက်ရင်ထွက် ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ဆေးရပြီး လူတွေကာကွယ်ဆေးအောင်ထားမှ ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲ…။ အားလုံးကူးစက်ခံတဲ့ နည်းလမ်းက အသေအပျောက်များမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကာကွယ်ဆေးမရခင်စပ်ကြားမှာ သတိရှိရှိနေဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကာကွယ်ဆေးက အစောဆုံး တစ်နှစ်စောင့်ရမယ်။ ဝုန်းဒိုင်းဆိုပြီး ခုချက်ခြင်းရအောင်လုပ်ဆိုတာမျိုး မရဘူး။ တစ်နှစ်လုံးတော့လည်း အိမ်တွင်းမအောင်းနေနိုင်ဘူး။ အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်။ အပြင်ပြန်ထွက်ရမယ်။ ဒီတော့ ကိုဗစ်နဲ့အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ရတော့မှာ။ ကိုဗစ်ပျောက်သွားမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေ မျှော်လင့်နေလို့ ရနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ရက်ပိုင်းလေး မတွေ့တာက ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ ရှာမတွေ့တာပဲရှိသေးတာ…။ ဒီကပ်ဆိုး အပြီးတိုင် … Read more
အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့လိုက်သောအခါ.
May 8, 2020 by Online Hartha
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေနဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရား။ အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်… အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ အလောင်းကိုအိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေအလောင်းချမယ်လုပ်တော့ အိမ်ရှင်တွေကအပြေးရောက်လာပြီး မျက်ရည်လေးစမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဆရာတို့ အိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူးနော် အိမ်ရှေ့မှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါနော်တဲ့ ” အမဘာဖြစ်လို့လဲ ” လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့… ဟိုလေ ” ဆရာ အပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းကို အိမ်ထဲမသွင်းကောင်းဘူးတဲ့ အိမ်သားတွေခိုက်တက်တယ် တဲ့ ” ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလဲမကြိုက်ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့… ဟောဗျာ…”ဒါနဲ့အမ အခုသေတဲ့သူက အမနဲ့ဘာတော်လဲ လို့မေးလိုက်တော့ “… ဆရာ အခုဆုံးသွားတဲ့သူက ကျွန်မအဖေ ပါတဲ့. အော်…ဟုတ်ကဲ့ အမအဖေလား ဒါဆိုအိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူး အပြင်မှာပဲ အလောင်းပြင်မယ်ပေါ့ … Read more
“သာမန်မိန်းကလေး နဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေး”
“သာမန်မိန်းကလေး နဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေး” သာမန်မိန်းကလေး က လူတွေရဲ့ personal ကိုစိတ်ဝင်စား ပါတယ်။ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေး က လူတွေရဲ့ activities ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ သာမန်မိန်းကလေးက ဘဝကို အဆင်းလှပမှု နဲ့ တန်ဆာ ဆင်တယ်။ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးက အရည်အချင်းလှပမှု နဲ့ တန်ဆာဆင်တယ်။ သာမန်မိန်းကလေးက လူတစ်ဦးရဲ့ဆိုးကွက်ကို အပြစ် ရှာပြီး ကဲ့ရဲ့တယ်။ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးက လူတစ်ဦးရဲ့ ကောင်းကွက်ကိုကြည့်ပြီး အတုယူတယ်။ သာမန်မိန်းကလေးက ချစ်သူရဲ့အတိတ်ကိုကြည့်ပြီး ပြဿ နာရှာတယ်။ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးကချစ်သူရဲ့ အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူ ပစ္စုပ္ပန်မှာအကောင်းဆုံး နားလည်ယုံကြည်မှုနဲ့ လှပတဲ့အနာဂတ်ကို ပုံဖော်တယ်…။ သာမန်မိန်းကလေးကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ လည်ပင်းဆွဲသီး ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေး ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ နူးညံ့တဲ့ မိခင်စိတ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ သာမန်မိန်းကလေးကအတင်းပြောရမှ အိပ်ပျော်တယ်။ … Read more
(၉၄) နှစ်အရွယ် အဖွားကို ပြုစုပေးနေတဲ့ သူနာပြုတွေကို မယုံလို့ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်လိုက်တဲ့အခါ …
မိသားစုတစ်စုဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်(၉၄)နှစ်အရွယ်အဖွားကို ပြူစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် ပုဂ္ဂလိက စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ အဖွားမှာ မသင်္ကာဖွယ်ရာ ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရလို့ မိသားစုဝင်တွေက အဖွားနေတဲ့အခန်းမှာ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ (၂၀၁၇)ခုနှစ် မတ်လက ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ပါ။ အဖွားနာမည်ကတော့ Paniben Shah ဖြစ်ပြီး သူမကို Brent မှာတည်ရှိတဲ့ Meera House အမည်ရ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာကို ပို့ပေးခဲ့တာပါ။ အဖွား Shah ဟာ ဂေဟာကို ရောက်ပြီးမှာ ကျန်းမာရေးပိုဆိုးလာပါတယ်။ နောက် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အရှိုးရာတွေလည်း တွေ့ရတဲ့အတွက်၊ မိသားစုဝင်တွေက တစ်ယောက်ယောက်က သူတို့ရဲ့ အဖွားကို နှိပ်စက်နေပြီဆိုတာကို သိခဲ့ပါတယ်။ အဖွား Shah ဟာ Dementia ကို ခံစားနေရလို့ တော်ရုံကိစ္စကို မမှတ်မိပါဘုး။ … Read more
သူတို့သားအဖ ကုသိုလ်ကံကလည်း ထူးတယ်
May 7, 2020 by Online Hartha
သူတို့သားအဖ ကုသိုလ်ကံကလည်း ထူးတယ်…. သူတို့သားအဖ ကုသိုလ်ကံကလည်း ထူးတယ် ဇနီးဖြစ်သူ လူနာနံပါတ် ၃၃ ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပေမယ့် သူတို့သားအဖ ကုသိုလ်ကံကလည်း ထူးတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ လူနာနံပါတ် ၃၃ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာနေတဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးမှာ ကိုဗစ် ရောဂါဖြစ်ချိန်မှာ အနီးကပ် ပြုစုခဲ့တဲ့သူက ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ပဲဂိုဒေါင်က ကုန်ထမ်းလုပ်သားဖြစ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ဆေးရုံတင်လိုက်ရတော့ သူနဲ့ ၁ နှစ်ခွဲအရွယ် သားလေးပဲ ကျန်ခဲ့တယ်…. အဆောင်ကလည်း နှင်ထုတ်ကြသလို ရပ်ကွက်က သူတို့ကို လက်မခံတော့ဘူး သူတို့သားအဖကို Q ဝင်ဖို့အတွက် ရဝေနွယ်(အင်းမ) ဆရာတော်ကျောင်းမှာ ခေါ်ထားခဲ့တယ်။မနေ့က Q ၂၁ ရက် ပြည့်ပြီးသည်အထိ သားအဖ နှစ်ယောက်လုံး ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြပဲ … Read more
တက္ကသိုလ်တွေ ဘယ်တော့ ပြန်ဖွင့်ပြီး စာသင်နိုင်မှာလဲဆိုတာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ သိရှိရန် နှင့် Q ၀င်ရန်အရေး
တက္ကသိုလ်တွေ ဘယ်တော့ ပြန်ဖွင့်ပြီး စာသင်မှာလဲဆိုတာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ သိဘို့… (1) လက်ရှိ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်စာအရ တက္ကသိုလ် ဆရာဆရာမတွေသည် မေလ(18)ရက် တနင်္လာနေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်အသီးသီးကို အရောက်သွားပြီး Duty Report လုပ်ရပါမယ…် (2) Duty Report လုပ်ပြီးရင် ဆရာဆရာမတွေသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသက ဝန်ုကြီးချုပ်နှင့် ပါမောက္ခချုပ်တွေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြောင့် Quarartine 21 ရက်ကို ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် ဝင်ရပါမယ်၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကတစ်ရက် (5000) ကျပ်၊ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်က (3000) ကျပ်၊ ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်က (4000) ကျပ် စသဖြင့် ပေးသွင်းပြီး Q 21 ရက်ဝင်ရပါမယ်၊ (18.5.2020) မှ (7.6.2020) နေ့အထိပါ၊ (3) ဆရာဆရာမတွေ … Read more
တစ်သက်လုံးအသုံးဝင်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးနည်းပေါင်းစုံ
May 6, 2020 by Online Hartha
တစ်သက်လုံးအသုံးဝင်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးနည်းပေါင်းစုံရှယ်သွားနော် တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် အသုံးဝင်မှာ သေချာပါတယ် ချောင်းဆိုးလျှင်….ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင်း ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ … ရင်ပြည့်ရင်ကယ်….ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှအသာအယာသပ်ချပါ … နှာပိတ်သော်…..ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့် ဆွဲပေးပါ … တက်လျှင်….ဆင်ငိုမြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည် … ရေငတ်ဝမ်းကျ …..ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်းကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ … ကင်းထိုးသော်…….ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာ ငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ … ကြို့ထိုးလျှင်……ကြက်သွန်းနီကိုထန်းလျှက်နှင့် နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား … ခရုသင်း…..ကျည်းသီးဆန်ကိုဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာ စားရပါသည် … ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လျှင်….ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပျောက်၏ … ခါးနာ ခါးကိုက်……ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည် လိမ်းပေးပါ … … Read more
တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတဲ့ မြန်မာတွေလား အစိုးရကို အကြပ်အတည်းဖြစ်အောင် လုပ်မယ့်သူတွေလား
“တလွဲဆံပင် ကောင်းသူများ” ဒီနေ့ သတင်းတခုဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်… Stay at home ကာလမှာ အိမ်ထဲမှာနေထိုင်သူတွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ လိုက်ကူညီနေတဲ့ ရန်ကုန်ချစ်သူများဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ ရုံးခန်းမှ ပစ္စည်းထုတ်ပိုးပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်လံဝေပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီအဖွဲ့က မိန်းကလေး ၇ ယောက်ကို အိမ်သို့မပြန်ခိုင်းတော့ဘဲ သင်္ဃန်းကျွန်းက ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတခန်းမှာ နေရာချပေးခဲ့တာကို ပါတ်ဝန်းကျင်အခန်းမှ ခါးခါးသီးသီးငြင်းတာ ခံရပါတယ်။ စည်ပင်က တာဝန်ရှိသူများရှင်းပြသည်ကိုတောင်လက်မခံဘဲ အတားစီး ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာက မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တမျိုးဆံပင်ကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ကြောက်ရမှာကို မကြောက် မကြောက်ရမှာကို ကြောက်နေကြခြင်းပါ။ အပြင်ထွက်ရင် mask တပ်ပါဆိုရင်တောင် mask မတတ်ဘဲ.. တချို့က စနစ်တကျမတတ်ဘဲသွားလာနေကြ။ လူစုစုမနေပါနဲ့ပြောတော့လဲ ဈေးထဲတိုးဝှေ့နေကြ။ ဒါမျိုးကြ မကြောက်တတ်ဘူး။ ခုခဏထားမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာရှင်တွေဟာ ပိုးတွေ့လူနာလဲမဟုတ် စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ သူလဲမဟုတ် … Read more
သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က သင့်ကို အိမ်မက်ထဲကနေ ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇)မျိုး
ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက၊ အသိ မိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကို သတိရတဲ့စိတ်ကတော်တော်နဲ့ မလျော့သွားပါဘူး။ ပြီးတော့ သေဆုံးပြီးတဲ့သူက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကို အိပ်မက်ပေးပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ်လို့လည်း ယူဆတတ်ပါတယ်။ တကယ်ရော အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိပါ့မလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဆုံးပါးသွားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားလာရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်ပါတယ် (၁) အိပ်မက်ကနိုးလာချိန်မှာတစ်ယောက်ယောက်စိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ် ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပေမယ့် သူတို့တွေကိုယ့်အနားမှာရှိနေတုန်းပဲလို့ စိတ်ထဲကနေထင်နေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ညအိပ်တဲ့အခါ သူတို့ကိုအိပ်မက်မက်ပြီး လန့်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ ဘေးနားကနေ တစ်ယောက်ယောက်ကြည့်နေသလို ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာက သူတို့တွေ သင့်ကိုအိပ်မက်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေလို့ပါတဲ့။ (၆) အိပ်ရာနိုးလာတဲ့အခါကြည်လင်လန်းဆန်းနေပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေမယ် သေဆုံးပြီးတဲ့သူတွေကိုအိပ်မက်မက်ပြီး မနက်အိပ်ရာနိုးလာတဲ့အခါ ကြည်လင်လန်းဆန်းနေမယ်၊ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် သူတို့တွေက သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နေပြီး သင့်ကိုမပင်ပန်းစေချင်တာကြောင့် ကောင်းကောင်းအနားရအောင် ကူညီပေးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ (၃) အိပ်မက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု … Read more